Vahaolana Samsung hivoaka amin'ny laharam-pahamehana: ny fakan-tsary eo ambanin'ny efijery | Androidsis
Samsung dia handefa Galaxy "écran rehetra" tsy misy notch ary miaraka amina fakan-tsary eo ambanin'ny efijery
Ilay notch dia misy mpanaratsy sy mpankafy azy, fa raha ny tena marina dia toa fomba iray hanomezana zava-baovao ho an'ny mpampiasa izy io, na dia tsy fantany aza izay hatao hanalavirana ny tenany amin'ny fifaninanana. Samsung dia iray amin'ireo mandalo ilay notch olympically, mba hahafantarantsika izao fa miomana hanafina ny fakantsary ao ambanin'ny efijery izy.
Like manana ny sensor ny dian-tànana amin'ny efijery iray ihany, ny orinasa Koreana dia afaka gaga ny azy sy ny olon-tsy fantatra indray mba hiala amin'ity hevitra ity Navoakan'i Essential ary navoakan'i Apple avy eo miaraka amin'ny iPhone X. Antenaina fa, satria efa nahita ny endrik'ilay notch aho, toy ny PixelManantena aho fa ho vitan'izy ireo izany.
Avy amin'ny SamsungMobile dia voalaza fa miasa i Samsung teknolojia vaovao hanafina ny fakantsary voalohany ambanin'ny efijery. Raha ny fantatra, ny orinasa Koreana dia mety hanana prototypes marobe miaraka amin'ity haitao efa vonona ity.
Tsy fantatra hoe oviana ny finday voalohany misy fakan-tsary tafiditra eo amin'ny efijery. Izany hoe, avela ho an'ny efijery ny eo anoloana manontolo, raha "miafina" ao ambaniny ny fakantsary raha tsy hitanay izany; farafaharatsiny izay no eritreretintsika.
Amin'izany fomba izany Samsung dia hanohy ny Galaxy S "efijery rehetra" ary izy io dia ho iray amin'ireo voalohany izay saika 100% ny tahan'ny efijery anoloana. Ny hany zavatra ilaina hofantarina hoe aiza no hamelana toerana ho an'ireo mpandahateny, ary bebe kokoa rehefa stereos eo aloha izy ireo, ary inona no ho sensor ho an'ny hazavana sy ny maro hafa.
ary,raha ilay Galaxy S10 io? Alao an-tsaina vetivety fa DJ Koh dia nivoaka niaraka tamin'ny Galaxy S10 miaraka amin'ny sensor fantsom-pifandraisana ambanin'ny efijery, ary izany nafenina tao ambaniny ilay fakantsary teo aloha. Azo antoka fa hanapaka ny drafitra rehetra izany ary hamela antsika hisoka vava.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung dia handefa Galaxy "écran rehetra" tsy misy notch ary miaraka amina fakan-tsary eo ambanin'ny efijery
Ny finday avoakan'i Huawei dia zava-misy ary ho tonga amin'ny 2019
Ahoana ny fomba hisorohana ny autoplay video ao amin'ny Twitter